मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्ता स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवनशैलीभारतीय भेरियन्ट अरुभन्दा आक्रामक : डा. पुन
बिहीबार, ०६ जेठ, २०७८ 0प्रतिक्रिया
काठमाडौँ / नेपालमा भारतीय भेरियन्टको कोरोना भाइरस भेटिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मङ्गलबार नेपालमा ‘भारतीय भेरियन्ट’को कोरोना भाइरस फैलिएको पुष्टि गरेको हो । परीक्षण गरिएको नमुनामध्ये ९० प्रतिशतमा भारतीय भेरियन्टको कोरोना भेटिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ । यो भेरियन्ट पहिलो पटक भारतमा भेटिएकाले ‘भारतीय भेरियन्ट’पनि भनिएको हो ।
हालसम्म बी १.६१७.१ विश्वका ३४ देशमा भेटिएको छ भने बी १.६१७.२ विभिन्न १० देशमा भेटिएको जानकारहरू बताउँछन् । दुबै भेरियन्टलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै विश्वव्यापी भेरियन्ट अफ कन्सर्न घोषणा गरेको छ । यो सबै उमेर समूहमा धेरै सङ्क्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनमा पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ ।
नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरस के हो ? यो कत्तिको घातक छ ? भन्ने विषयमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल टेकुका सरुवा रोग विषेशज्ञ डा. शेरबहादुर पुनसँगको कुराकानी :
नेपालमा देखिएको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरस यसअघिको भाइरसभन्दा जटिल र घातकखालको छ । कुनै पनि महामारी निम्त्याउने भाइरस हरेक भेरियन्टमा परिवर्तन हुँदै आउँछ । कुनै एकदमै आक्रामक तरिकाले आएको हुन्छ भने कुनै हल्का तरिकाले आएको पाइन्छ । तर अहिले आएको नयाँ भाइरस अन्यको तुलनामा आक्रामक र बढी घातक मानिन्छ ।
यो भारतबाट सुरुवात भएकाले यसलाई ‘भारतीय भेरियन्ट’ नाम दिइएको हो । यो युके भेरियन्टभन्दा अझै तीब्र गतिमा फैलिनेखालको छ । यसले सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर गर्ने अध्ययनमा देखिएको छ । नयाँ भेरियन्ट एकै पटकमा सयौँ जनालाई सर्नसक्ने क्षमताको रहेको छ । यसरी हेर्दा अरु भेरियन्टभन्दा यो अझ धेरै आक्रमक प्रविधिको देखिन्छ । यो भेरियन्टले भारतमा जुन गतिमा सङ्क्रमण फैलियो र तहसनहस बनायो । नेपालमा पनि त्यसको सङ्केत देखिएको थियो । त्यो पुष्टि हुनु हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो ।
यसले ६०/६५ वर्षका ज्येष्ठ नागरिकदेखि ३/४ वर्षका बच्चासम्म सबैलाई असर गर्ने गर्छ । यो नयाँ भेरियन्टको भाइरस छिट्टै सर्ने, सङ्क्रमितमा धेरै लक्षण देखिने र यसले मान्छेलाई मृत्युको मुखसम्म लैजानेखालको छ । जुन अघिल्ला भेरियन्टको तुलनामा बढी खतरनाक मानिएको छ ।
यो युके भेरियन्टभन्दा अझै तीब्र गतिमा फैलिनेखालको छ । यसले सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर गर्ने अध्ययनमा देखिएको छ । नयाँ भेरियन्ट एकै पटकमा सयौँ जनालाई सर्नसक्ने क्षमताको रहेको छ । यसरी हेर्दा अरु भेरियन्टभन्दा यो अझ धेरै आक्रमक प्रविधिको देखिन्छ ।
अहिलेसम्म कोरोना भाइसरको कतिवटा भेरियन्ट नेपालमा भित्रियो भन्ने पत्ता लगाउने क्षमता हामीसँग अहिलेसम्म पनि छैन । जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने भनेको कति महिना भयो हामी यताउता अल्झिएका छौँ । नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल आदिले काम गरिरहेको छ । तर त्यो पनि प्लानिङलगायततिर नै अल्झिरहेको छ ।
अहिले देखिएका सङ्क्रमितमध्ये कति प्रतिशतमा यो नयाँ भाइरस देखिएको हो ?
यो भाइरसका लागि हामीसँग उपलब्ध भएको खोपहरुले काम गर्छ कि गर्दैन ?
अहिले हामीले लगाएको खोप एस्टाजेनिकाले पनि काम गर्छ । त्यस्तै, कोभ्याक्सिनले पनि काम गर्छ । यी दुवै भ्याक्सिनले राम्रो काम गर्छ भन्ने रिपोर्टमा आएको छ । भेरोसेलले पनि राम्रै काम गरिरहेको छ ।
नयाँ भेरियन्टमा लक्षणहरू फरक देखिएको छ ?
भेरियन्ट नयाँ भए पनि लक्षणहरु फरक देखिएको छैन । अरु भेरियन्टमा जस्तै रुघा लाग्ने, सुख्खा खोकी लाग्ने, छाति दुख्ने जस्ता नै लक्षण देखिन्छन् । यसमा मुखले स्वाद नपाउने । कोही–कोही सङ्क्रमितलाई खाना खाँदा माटोजस्तो स्वाद आउने गरेको पनि देखिएको छ । समंग्रमा लक्षणहरु उस्तै हुन् ।